Cách Trồng Và Chăm Sóc Cỏ Sân Vườn đúng Kỹ Thuật | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cách Trồng Và Chăm Sóc Cỏ Sân Vườn đúng Kỹ Thuật | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cách Trồng Và Chăm Sóc Cỏ Sân Vườn đúng Kỹ Thuật | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ukutyala kunye nokunyamekela ingca yasegadini ngokufanelekileyo Ngaba ngokwenene kunzima njengoko abantu becinga? Ngaba ndiyakwazi ukutyala ingca ngezandla kwisitiya sam esincinci?
Nguye a igadi Ngoluhlu olupheleleyo lwezityalo zokuhombisa ozithandayo, zilungele wonke umntu. Umyezo iya kuba banzi kwaye ibe nomoya ngakumbi xa igqunywe zizityalo eziluhlaza kunye neentyatyambo. Ukutyala ingca egadini nako kunegalelo elikhulu ekudaleni indawo eluhlaza egadini.
Kodwa akusoloko ingca etyalwayo isoloko iluhlaza kwaye isempilweni; ukuba awuyazi indlela yokutyala nokukhathalela ngokufanelekileyo. Ngoko ke oku kulula okanye kunzima; Nceda ubhekisele kwinqaku elingezantsi kunye neHanoi bonsai ukuze ufumane impendulo!
Ukutyala nokukhathalela ingca yasegadini
1 Amanqaku phambi kokutyala ingca yasegadini
1.1 Ukukhanya kwelanga ngowona mba uphambili ekugqibeni ngokutyala ingca egadini
1.2 Ukumisela uhlobo olufanelekileyo lwengca yegadi
1.2.1 Ngokusekelwe kwimozulu yemozulu
1.2.2 Indawo esesitiyeni kufuneka kutyalwe ingca
1.2.3 Indawo yaseGadini
1.2.4 Isitayile soyilo lwegadi
2 Indlela yokutyala ngokufanelekileyo ingca yasegadini
2.1 Lungisa umhlaba phambi kokutyala ingca yasegadini
2.2 Lungisa imbewu elungileyo phambi kokutyala ingca yasegadini
2.3 Ukutyala ingca igadi
3 Indlela yokunyamekela ingca yegadi ukuze ihlale iluhlaza
3.1 Indlela yokunyamekela ingca esanda kutyalwa egadini kwinyanga yokuqala
3.2 Unakekele ingca yegadi kwiinyanga ezilandelayo
3.3 Ezinye izinambuzane eziqhelekileyo kunye nezifo zengca yasegadini
Amanqaku phambi kokutyala ingca yasegadini
Ukukhanya kwelanga ngowona mba uphambili ekugqibeni ngokutyala ingca egadini
Ingca yegadi uphuhliso okanye hayi; intle njengoko ndisenokucinga okanye akunjalo; Ukukhanya kwelanga yeyona nto ibalulekileyo kule ngxaki. Chonga igadi ukutyala ingca kukho ngaphezulu okanye ngaphantsi kwelanga ukukhetha ingca eyiyo ityalwe umyezo ngumsebenzi obaluleke kakhulu.
Ukutyala ingca egadini
Ukuba indawo eza kulinywa inelanga elininzi, ingatyalwa Ingca yevelvet yaseJapan, ingca erhubuluzayo; Kufuneka libe lincinci ilanga ukukhula kwengca yegqabi lejinja; Ukuba akukho ilanga, kungcono ukusebenzisa ingca eyenziweyo okanye ungatyali ingca kuba yinkcitho yemali. Kuba ilanga limisela ukusinda kwengca yakho.
Ukukhanya kwelanga yeyona nto ithatha isigqibo malunga nokutyala ingca okanye hayi?
Ukumisela uhlobo olufanelekileyo lwengca yegadi
Umsebenzi Qinisekisa uhlobo lwengca olululo oza kulinywa egadini ngokusekelwe kwizinto ezininzi ezahlukeneyo ezifana: imozulu; imozulu; indawo yokutyala, isitayile soyilo lwendlu…
Qinisekisa uhlobo lwengca olululo oza kulinywa egadini
Ngokusekelwe kwimozulu yemozulu
Ummandla ngamnye we-cashew unemozulu nemozulu eyahlukileyo; umsebenzi ingca Kukwaxhomekeke kwimozulu yendawo nganye. Nangona kunjalo, okwangoku, uninzi lwengca ye-cashew iqhelene kakuhle nokusingqongileyo, ngaphandle kolunye uhlobo lokhula olukhethayo malunga nemozulu.
Qinisekisa uhlobo lwengca oza kuyityala egadini ngokusekelwe kwimozulu
Indawo esesitiyeni kufuneka kutyalwe ingca
Zonke iindawo egadini zinokutyalwa, kodwa kufuneka zibe nokukhanya kwelanga. Ummandla osecaleni kwendlu uhlala usetyenziswa njengendlela yokuhamba, phakathi kwelitye eligayiweyo, amacala amabini angatyalwa ngengca yeenwele zehagu okanye ingca ye-ginger leaf, eya kuba yinto enhle kakhulu.
Qinisekisa uhlobo lwengca oza kuyityala egadini ngokusekelwe kwindawo yokutyala
Kuba igadi ububanzi njengomyezo kwiivillas; isigqumathelo sengca singatyalwa; ukudala iinduli, ukwenza amachibi ukuze indawo ibonakale ngakumbi; unga tyala ingca yevelvet okanye ingca enoboya behagu yokutyala isigcina-kufuma ukugudisa umphezulu.
Khetha ingca oza kuyityala ngokusekelwe kwindawo yegadi
Isitayile soyilo lwegadi
Ngokuqhelekileyo, kuya kusekelwe kwi-architecture yendlu yokudala amaphiko omyezo. Kuya kwandula ukuba kuqondwe ukuba unjani na umthi ewunyuliweyo; ukhula egadini. Oku kuya kubalaselisa ubuhle begadi, okwenza umfanekiso opheleleyo wegadi umanyene kwaye uhle. Ngokuchasene noko, ukuba ukhetha uhlobo lwengca olungahambelani nohlobo oluqhelekileyo lwendlu, luya kuphazamisa isitayela kunye nobuhle begadi.
Yenza ingca yegadi
Indlela yokutyala ngokufanelekileyo ingca yasegadini
Kwimarike yangoku, kukho iintlobo ezininzi zengca ekhulayo yokugubungela igadi; kufuneka ikhankanywe ngolu hlobo: Ingca yevelvet yaseJapan, ingca yoboya behagu; Ingca yamagqabi ejinja, ingca yeTorus, ingca yamandongomane… Ngokuxhomekeke kwindawo yokutyala ngokunjalo nezinto ozikhethayo, khetha olona hlobo lufanelekileyo lwengca.
Imiyalelo yokutyala ingca yasegadini ngokufanelekileyo
Kwaye ukuze ingca yegadi ihlale iluhlaza, kubaluleke kakhulu ukutyala ingca ngokuchanekileyo. Yizani, kunye Hanoi Bonsai Funda ngakumbi ngalo msebenzi kamva!
Lungisa umhlaba phambi kokutyala ingca yasegadini
Kufuneka kuqala sicoce ukhula; Nkcenkceshela ngokucokisekileyo nangokucokisekileyo ukuze umhlaba ungatshoni. Eli nqanaba libaluleke kakhulu ukwenza isigqibo sokuba ingaba ingca yakho ithe tyaba okanye hayi.
Fumisa umhlaba phambi kokutyala ingca
Yenza ngokulandelayo umhlaba ongaphezulu onemingxuma kwangaxeshanye udala inkqubo yokuhambisa amanzi kakuhle kwingca ngokukodwa kunye negadi ngokubanzi.
Lungisa umhlaba phambi kokutyala
Okulandelayo kukusasaza umaleko wesichumiso esixutyiweyo esiquka: ubulongwe benkomo + i-rice husk ash + coconut humus + humus umhlaba. Ubunzima balo maleko womgquba buxhomekeke ekubeni umhlaba ongaphezulu umbi okanye ulungile.
Indlela yokukhulisa ingca ihlala iluhlaza
Okokugqibela, sebenzisa iraki ukuxuba umhlaba ongaphezulu kunye nomgquba.
Sebenzisa iraki ukuxuba umxube womhlaba
Lungisa imbewu elungileyo phambi kokutyala ingca yasegadini
Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nenyani yeprojekthi nganye, lungiselela isixa esifanelekileyo sengca yengca. Qaphela ukuba kufuneka kusetyenziswe ingca encinci xa kutyalwa.
Ukulungisa ingca yegadi
Uhlobo ngalunye lwe-mulch luneemfuno zalo zobugcisa. Kukho iimfuno ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwindlela yokutyala ikhaphethi okanye ukutyala. Ngengca ekhaphethiweyo efana ne: Japanese velvet grass; ingca enoboya behagu… emva koko ibe yi-1m2 imbewu yengca iyakukhula 1.2 m2 umhlaba. Ngokuphathelele ingca elinywayo njenge: Igqabi lejinja; Torus chi… ukuba ufuna ukukhula utyebe, uya kufumana 2m2 ukutyala okuphakathi kuya kufumana i-3m2; Ukuba ufuna ukukhula ube bhityile, uya kunyuka uye kuthi ga kwi-4 m2 umhlaba.
Indlela yokutyala ingca yasegadini
Ukutyala ingca igadi
Inyathelo 1: Ukutyala ingca (emva kokulungisa umhlaba)
Kwikhaphethi yengca: Sebenzisa indawo yeemethi zembewu ngokwenani eliqhelekileyo le-0.5x1m esasazwe ngokuthe tye, kwaye ingca nganye iya kuba kufutshane enye kwenye ngokomgca wenkophe. Kwingca elinywayo: Yahlula amahlahla embewu yengca abe ngamasetyana amaninzi. Isebe ngalinye liya kuba malunga neembewu zengca ezi-3-5. Yibeke ngobunono phantsi okanye usebenzise i-awl ukwenza umngxuma kunye nokunciphisa i-blade yengca.
Inyathelo lesi-2: Sebenzisa ilindle Xuba i-rice husk ash kwaye usasaze ngaphezulu umphezulu ingca (ukuba ikhaphethi ayifuni lo mthungo)
Ukusasaza umgquba ukutyala ingca yasegadini
Inyathelo lesi-3: Sebenzisa isigqubuthelo somthi, esigalelwe kancinci ukuze iingcambu zengca zincamele emhlabeni. Ngexesha elifanayo, ufefe umhlaba omlotha owongezelelweyo kwiindawo apho uswele khona.
Ukutyala ingca ephakathi kuya kukhula kakuhle
Ingcebiso: Amava abonisa ukuba ukutyala kokubini kuneyona nto iluncedo, ukonga imbewu nokuvumela ingca ukuba ikhule kwaye ivelise iingcambu ezininzi. Ngale ndlela yokutyala, emva kweentsuku ezingama-20-25, ingca ihlanganiswe ngokulinganayo, igudileyo kwaye intle.
Indlela yokunyamekela ingca yegadi ukuze ihlale iluhlaza
Ukongeza kokutyala ingca yasegadini ngobuchule obufanelekileyo, ukhathalelo lwengca lukwayinxalenye ebalulekileyo ngokulinganayo kuwe ukuba ube nengca yegadi echumileyo.
Ukhathalelo lwengca yasegadini
Indlela yokunyamekela ingca esanda kutyalwa egadini kwinyanga yokuqala
Nini ingca yasegadini esanda kutyalwa kufuneka unikeze ukufuma okwaneleyo; Ngoko ke, kufuneka inkcenkceshelwe rhoqo. Qaphela ukuba kuyimfuneko ukucima iindawo apho amanzi aphelileyo ukuphepha utshani obunamanzi kwaye ukongezelela amanzi kwiindawo apho ingca ityalwe khona ukudala iinduli eziphakamileyo.
Ukunkcenkceshela ingca yegadi
Isichumisi sibonelela ngezondlo kwingca. Kwinyanga yokuqala, kufuneka unikele ingqalelo kwezi zihlandlo zi-3 zilandelayo:
Kwiintsuku ezi-5 emva kokutyala, kufuneka ufake i-2kg DAP/100m2
Kwiintsuku ezili-15 emva kokutyala, galela i-3kg yeDAP/100m2
Kwiintsuku ezingama-30 emva kokutyala, galela i-2kg ye-NPK 16-16-8 kunye ne-1kg yekeyiki yeoli/100m2
Isichumisi sibonelela ngezondlo kwingca
Ngaphandle koko, kuyimfuneko ukuhlakula rhoqo ngamaxesha angama-2-3 ngenyanga yokuqala, ukuze singasayi kubona ukhula.
Unakekele ingca yegadi kwiinyanga ezilandelayo
Ukunkcenkceshela: Soloko udala ukufuma emhlabeni, ukutyeba komhlaba ubuncinane yi-3cm. Vula intsimi xa kune imvula eninzi, musa ukuvumela ingca ukuba izaliswe ngamanzi ngaphezu kweeyure ezingama-24.
Isichumisi: Nyanga nganye, i-2kg ye-DAP/100m2 kufuneka igalelwe. Ukuba ingca imnyama kakhulu, buyisela iDAP nge-NPK (16-16-8). Ukuba ingca ayigudi, yongeza i-1 kg yekeyiki yeoli/100m2. Kwiminyaka embalwa kamva, kuyafuneka ukuba kugalelwe izichumiso ezininzi eziphilayo kunye ne-micro-organisms ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokuxhomekeke kwingca yokwenyani.
Coca ukhula ukugcina igadi intle
Qaphela ukuba ukhula kufuneka lucocwe rhoqo kunye nenkqubo yokucheba ingca; Ukugcina ubuhle bengca yegadi kwi-avareji ukusuka kwiintsuku ezingama-20 ukuya kwezingama-30, usike kube kanye. Xa usika kufuneka ushiye malunga ne-1-1.5cm.
Rhoqo ukucheba ingca ukwenza inkangeleko entle yegadi
Ezinye izinambuzane eziqhelekileyo kunye nezifo zengca yasegadini
Ingca yegadi isoloko ihlaselwa zizinambuzane nezifo ngenxa yezizathu ezininzi ezahlukeneyo. Kunokwenzeka ukuba ukungabikho okanye ukugqithisa kwezondlo kwenza umhlaba we-pH ungazinzi; utshintsho lwemozulu; Ukukhupha amanzi amdaka… Iintlobo ezininzi zengca zosulelekile ngenxa yokutshintsha kwemozulu; Oku kukwangoyena nobangela wokuba ingca yegadi ihlaselwe zizinambuzane ezitshabalalisayo.
Luthathele kakuhle ukhula ukuthintela izitshabalalisi
Iintwala, imibungu etya amagqabi, imisundululu emhlophe…. zizitshabalalisi eziqhelekileyo kwingca. Ungasebenzisa i-Bassa: unyango lwe-planthoppers; Fenbis: unyango lweentshulube; I-Vibasu 10H: unyango lweentshulube ezimhlophe, iintshulube, iimbumba, iikhilikithi, iimbovane … (Umthamo kunye nokusetyenziswa kulandelwa imiyalelo kwileyibhile yeziyobisi okanye ukupakisha).
Yinyamekele ingca yegadi yakho ngokufanelekileyo ukuze ube negadi entle
Ukuba unesidingo sokutyala ingca yengca kwikhampasi yakho yasekhaya okanye wenze ingca eluhlaza ejikeleze iipaki, iinkampani, iipaki zemizi-mveliso, njl., unokuqhagamshelana nathi ngoko nangoko. Hanoi Bonsai ukufumana iingcebiso ezithe ngqo.
Cách trồng Củ Cải Đỏ cho Củ to đỏ ngọt ít người biết | Hatgiongtihon.net
Kỹ thuật Trồng Chuối năng suất cao “hiệu quả nhất” | Hatgiongtihon.net